သင့္မွာ ၀က္ၿခံေပါက္ေနလွ်င္ မိတ္ကပ္နဲ႔ ဘယ္လိုဖံုးကြယ္မလဲ? - Lifestyle Myanmar
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ကစလို႔ ေဟာ္မုန္းေတြ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ၀က္ၿခံမေပါက္ဘူးတဲ့ သူမရွိပါဘူး။ ၀က္ၿခံေပါက္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့ အဆီအထြက္မ်ားျခင္း၊ အေရျပားဆဲလ္ေသမ်ားရွိျခင္း၊ ေခၽြးေပါက္မ်ားတြင္ အညစ္အေၾကးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ေနျခင္းႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊား ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို၀က္ၿခံေပါက္တဲ့အခ်ိန္ဆို မိတ္ကပ္လိမ္းရတာ အဆင္မေျပေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ၀က္ၿခံေတြကို ယာယီ ဖံုးကြယ္ေစမယ့္ မိတ္ကပ္လိမ္းနညး္ေလးကို မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္း ၀က္ၿခံထြက္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသဖို႔လိုပါတယ္။
Concealer ကို မွန္ကန္တဲ့အေရာင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေအာက္ခံမိတ္ကပ္ ပါးပါးေလးတို႔ျခင္း၊ ေပါင္ဒါအသံုးျပဳျခင္းက ၀က္ၿခံေတြကို ယာယီ ဖံုးကြယ္ေပးပါတယ္။
မစတင္ခင္မွာ သင့္မ်က္ႏွာကို ေဖာင္ေဒးရွင္းခပ္ပါးပါးေလးနဲ႔ အစက္အေျပာက္ ကုသမႈကို ေပါင္းစပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
သင့္အသားအေရအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ မွန္ကန္တဲ့ Primer ကိုအၿမဲေရြးခ်ယ္ပါ။ ေရာင္ရမ္းေနတဲ့ အစက္အေျပာက္ေပၚမွာ အထူးသျဖင့္ ဖံုးကြယ္တဲ့ေနရာမွာ အဆီမပါတဲ့ Primer ကို သံုးစြဲဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မွဲ႔ေျခာက္၊ တင္းတိပ္၊ အမာရြတ္ေတြ ရွိေနလွ်င္ SPF ပါ၀င္တာကို ေရြးခ်ယ္တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ ေနေရာင္ထိေတြ႕မႈက အနာေပ်ာက္ကင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ေႏွးေကြးေစပါတယ္။
သင့္အသားအေရာင္ႏွင့္လိုက္ဖက္တဲ့ ကြန္ဆီလာကို ရွာေဖြပါ။ ဒါ့အျပင္ မွန္ကန္တဲ့အေရာင္ကလည္း နီရဲတဲ့ အဖုအပိန္႔ေတြကို ဖံုးကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
၃။ Concealer brush
ႏူးညံ့တဲ့ ကြန္ဆီလာဘရပ္တစ္ခုက Blending လုပ္ဖို႔နဲ႔ တိက်တဲ့ လိမ္းခ်ယ္မႈအတြက္ အလြန္အေရးပါပါတယ္။
၀က္ၿခံေပါက္ေနလွ်င္ ကယ္မီကယ္မ်ားလြန္းတဲ့ ေအာက္ခံမိတ္ကပ္ေတြက ၀က္ၿခံကို ပိုဆိုးေစတာေၾကာင့္ non-comedogenic foundation ကိုအသံုးျပဳတာက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၎က ၀က္ၿခံေဆးေတြနဲ႕ မတည့္မွာလည္း မပူရပါဘူး။
သင့္ရဲ႕ ၀က္ၿခံေပါက္ေနတဲ့အသားအေရကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ mineral ေပါင္ဒါကို အသံုးျပဳပါ။ သူတို႔က နည္းနညး္ပဲ ဖံုးကြယ္ေပးေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ ၀က္ၿခံထြက္မယ့္ ျပႆနာႏွင့္ သင့္ေခၽြးေပါက္ပိတ္တာကို ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။
၀က္ၿခံေတြကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ ရိုးရွင္းတဲ့ နညး္ပညာေလးေတြ
အဆင့္ ၁။ သင့္အေရျပားကို သန္႔ရွင္းၿပီး moisturize လုပ္ေပးပါ
မိတ္ကပ္ လိမ္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုးမ်က္ႏွာကို လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ တိုနာထည့္ၿပီး ေကာင္းေကာင္း သန္႔စင္ေပးဖို႔ ပါတယ္။ သင့္အသားအေရအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့၊ အဆီမပါတဲ့ moisturizing lotion ကို ညင္သာစြာ အသံုးျပဳေပးပါ။
အဆင့္၂။ Primer လိမ္းပါ
သင့္အသားအေရႏွင့္ မိတ္ကပ္အၾကား အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ Primer ကိုလိမ္းေပးပါ။ သင့္မ်က္ႏွာ တျပင္လံုး Primer ကိုအသံုးမျပဳခ်င္လွ်င္ ဘရပ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အစက္အေျပာက္နဲ႔ ၀က္ၿခံေပါက္တဲ့ ေနရာေတြကိုသာ လိမ္းေပးပါ။
အဆင့္ ၃။ မွန္ကန္တဲ့ အေရာင္နဲ႔ ကြန္ဆီလာကို လိမ္းခ်ယ္ပါ
အစိမ္းေရာင္ ကြန္ဆီလာက နီျမန္းျခင္းႏွင့္ တင္းတိပ္၊အစက္ေျပာက္ေတြရဲ႕ ဘယ္လကၡဏာမဆို ဖံုးကြယ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအလုပ္လုပ္ပါတယ္။ သင့္အသားအေရာင္ႏွင့္ လံုး၀လိုက္ဖက္တဲ့ ကြန္ဆီလာကို လိမ္းၿပီး ဘရပ္တစ္ခုႏွင့္ လိုက္ညိွပါ။ ဒါက အစက္အေျပာက္ေတြကို မႈန္၀ါးေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။
အဆင့္ ၄။ ေဖာင္ေဒးရွင္း ခပ္ပါးပါးလိမ္းပါ
ဒီအဆင့္ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းအသံုးမျပဳခ်င္လွ်င္ BB cream တစ္ခုခုကို သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မလိမ္းတာျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေအာက္ခံမိတ္ကပ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း လိမ္းမယ္ဆိုရင္ မိတ္ကပ္အနည္းငယ္ကို ေရျမဳပ္ႏွင့္ Blending လုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ stippling brush သံုးၿပီး ညိွေပးႏုင္ပါတယ္။
အဆင့္ ၅။ ေပါင္ဒါလိမ္းျခင္း
မိတ္ကပ္လိမ္းၿပီးတဲ့အခါ မ်က္ႏွာေျပာင္လက္ေနတာကို မႀကိဳက္တဲ့သူေတြ ၊၀က္ၿခံကို ဖံုးကြယ္ခ်င္တဲ့သူေတြဟာ သိပ္သည္းတဲ့ ေပါင္ဒါကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
မိတ္ကပ္လိမ္းၿပီးတဲ့အခါ အၿပီးသက္မွာ စပေရးကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက သင့္မိတ္ကပ္ကို တာရွည္ခံေစမွာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ မိတ္ကပ္ကြက္ျခင္း၊ ထူလပ်စ္ႀကီးျဖစ္ျခင္းမွ တားဆီးေပးပါတယ္။
သင့်မှာ ဝက်ခြံပေါက်နေလျှင် မိတ်ကပ်နဲ့ ဘယ်လိုဖုံးကွယ်မလဲ?
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကစလို့ ဟော်မုန်းတွေ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဝက်ခြံမပေါက်ဘူးတဲ့ သူမရှိပါဘူး။ ဝက်ခြံပေါက်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့ အဆီအထွက်များခြင်း၊ အရေပြားဆဲလ်သေများရှိခြင်း၊ ချွေးပေါက်များတွင် အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်နေခြင်းနှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှား တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝက်ခြံပေါက်တဲ့အချိန်ဆို မိတ်ကပ်လိမ်းရတာ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဝက်ခြံတွေကို ယာယီ ဖုံးကွယ်စေမယ့် မိတ်ကပ်လိမ်းနညး်လေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း ဝက်ခြံထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့လိုပါတယ်။
Concealer ကို မှန်ကန်တဲ့အရောင်ရွေးချယ်ခြင်း၊ အောက်ခံမိတ်ကပ် ပါးပါးလေးတို့ခြင်း၊ ပေါင်ဒါအသုံးပြုခြင်းက ဝက်ခြံတွေကို ယာယီ ဖုံးကွယ်ပေးပါတယ်။
မစတင်ခင်မှာ သင့်မျက်နှာကို ဖောင်ဒေးရှင်းခပ်ပါးပါးလေးနဲ့ အစက်အပြောက် ကုသမှုကို ပေါင်းစပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အသားအရေအမျိုးအစားနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် မှန်ကန်တဲ့ Primer ကိုအမြဲရွေးချယ်ပါ။ ရောင်ရမ်းနေတဲ့ အစက်အပြောက်ပေါ်မှာ အထူးသဖြင့် ဖုံးကွယ်တဲ့နေရာမှာ အဆီမပါတဲ့ Primer ကို သုံးစွဲဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မှဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ်၊ အမာရွတ်တွေ ရှိနေလျှင် SPF ပါဝင်တာကို ရွေးချယ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ နေရောင်ထိတွေ့မှုက အနာပျောက်ကင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို နှေးကွေးစေပါတယ်။
သင့်အသားအရောင်နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ ကွန်ဆီလာကို ရှာဖွေပါ။ ဒါ့အပြင် မှန်ကန်တဲ့အရောင်ကလည်း နီရဲတဲ့ အဖုအပိန့်တွေကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နူးညံ့တဲ့ ကွန်ဆီလာဘရပ်တစ်ခုက Blending လုပ်ဖို့နဲ့ တိကျတဲ့ လိမ်းချယ်မှုအတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။
ဝက်ခြံပေါက်နေလျှင် ကယ်မီကယ်များလွန်းတဲ့ အောက်ခံမိတ်ကပ်တွေက ဝက်ခြံကို ပိုဆိုးစေတာကြောင့် non-comedogenic foundation ကိုအသုံးပြုတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းက ဝက်ခြံဆေးတွေနဲ့ မတည့်မှာလည်း မပူရပါဘူး။
သင့်ရဲ့ ဝက်ခြံပေါက်နေတဲ့အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ mineral ပေါင်ဒါကို အသုံးပြုပါ။ သူတို့က နည်းနညး်ပဲ ဖုံးကွယ်ပေးပေမယ့် နောက်ထပ် ဝက်ခြံထွက်မယ့် ပြဿနာနှင့် သင့်ချွေးပေါက်ပိတ်တာကို လျော့နည်းနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
ဝက်ခြံတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ နညး်ပညာလေးတွေ
အဆင့် ၁။ သင့်အရေပြားကို သန့်ရှင်းပြီး moisturize လုပ်ပေးပါ
မိတ်ကပ် လိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးမျက်နှာကို လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ် တိုနာထည့်ပြီး ကောင်းကောင်း သန့်စင်ပေးဖို့ ပါတယ်။ သင့်အသားအရေအမျိုးအစားနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့၊ အဆီမပါတဲ့ moisturizing lotion ကို ညင်သာစွာ အသုံးပြုပေးပါ။
အဆင့်၂။ Primer လိမ်းပါ
သင့်အသားအရေနှင့် မိတ်ကပ်အကြား အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် Primer ကိုလိမ်းပေးပါ။ သင့်မျက်နှာ တပြင်လုံး Primer ကိုအသုံးမပြုချင်လျှင် ဘရပ်တစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အစက်အပြောက်နဲ့ ဝက်ခြံပေါက်တဲ့ နေရာတွေကိုသာ လိမ်းပေးပါ။
အဆင့် ၃။ မှန်ကန်တဲ့ အရောင်နဲ့ ကွန်ဆီလာကို လိမ်းချယ်ပါ
အစိမ်းရောင် ကွန်ဆီလာက နီမြန်းခြင်းနှင့် တင်းတိပ်၊အစက်ပြောက်တွေရဲ့ ဘယ်လက္ခဏာမဆို ဖုံးကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင့်အသားအရောင်နှင့် လုံးဝလိုက်ဖက်တဲ့ ကွန်ဆီလာကို လိမ်းပြီး ဘရပ်တစ်ခုနှင့် လိုက်ညှိပါ။ ဒါက အစက်အပြောက်တွေကို မှုန်ဝါးစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
အဆင့် ၄။ ဖောင်ဒေးရှင်း ခပ်ပါးပါးလိမ်းပါ
ဒီအဆင့်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းအသုံးမပြုချင်လျှင် BB cream တစ်ခုခုကို သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ မလိမ်းတာဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အောက်ခံမိတ်ကပ် ဖောင်ဒေးရှင်း လိမ်းမယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်အနည်းငယ်ကို ရေမြုပ်နှင့် Blending လုပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် stippling brush သုံးပြီး ညှိပေးနုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၅။ ပေါင်ဒါလိမ်းခြင်း
မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးတဲ့အခါ မျက်နှာပြောင်လက်နေတာကို မကြိုက်တဲ့သူတွေ ၊ဝက်ခြံကို ဖုံးကွယ်ချင်တဲ့သူတွေဟာ သိပ်သည်းတဲ့ ပေါင်ဒါကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးတဲ့အခါ အပြီးသက်မှာ စပရေးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင့်မိတ်ကပ်ကို တာရှည်ခံစေမှာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် မိတ်ကပ်ကွက်ခြင်း၊ ထူလပျစ်ကြီးဖြစ်ခြင်းမှ တားဆီးပေးပါတယ်။
ခေတ်မှီမှီနဲ့ဂန္တဝင်ဆန်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ အချက် (၅) ချက်
ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ပါ။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက် အတွင်းစိတ်ဖြူစင်ဖို့က နံပါတ်တစ်အရေးကြီးတာသေချာတာပေါ့။ ပြီးရင် နောက်ထပ်ဘာကများအရေးကြီးဦးမလဲ.... အလှအပရေးရာဆိုတာက မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် သိပ်ကိုအရေးပါတာပေါ့။ ဒါဆိုဂန္တဝင်ဆန်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်လဲမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ နှုတ်ခမ်းနီဖျက်ဖို့ ဗာဒံဆီကို အသုံးပြုပါ။ မိန်းကလေးတွေလိုချင်တဲ့နှုတ်ခမ်းနီဆိုတာက မနက်တည်းကဆိုးထားရင် ညမအိပ်ခင်အထိ...
သင့်ရဲ့ ဆံပင်တွေကို ဘာကြောင့် မကြာခဏခေါင်းလျှော်သင့်တာလဲ?
သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ တစ်ပတ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်လျှော်တတ်ကြပါသလဲ? (သို့) ခေါင်းမလျှော်ဘဲ ဘယ်လောက်ကြာကြာအထိ နေဖူးပါသလဲ? အဖြေအမျိုးမျိုးထွက်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆံပင်ရှည်သူတွေအတွက်တော့ ခေါင်းလျှော်ရတာဟာ အလွန်ခက်ခဲကြောင်း ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ ဆံပင်တွေကို ဘာကြောင့်မကြာခဏလျှော်သင့်တာလဲဆိုတာကိုတော့ သိထားရင် ခေါင်းလျှော်ရတာ ပျင်းတဲ့စိတ်လေးတွေ...